कंगनाको निशानामा अब बच्चन परिवार: जया बच्चनलाई दिईन् यस्तो सुझाव…. – सडक मिडिया
काठमाडौं: बलिउड अभिनेत्री कंगना रनावत लगातार चर्चामा आइरहेकी छन्। उनी सामाजिक सञ्जालमा नि’डरताका साथ अभि’व्यक्ति दिँदै आएकी छन्।अहिले उनले गरेको एक ट्वीटको कारण उनी फेरि चर्चामा छिन्।
कंगना रनावतले ट्वीट गरेर भनिन्- जया जी, तपाई अझै पनी यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ यदि मेरो ठाउँमा तपाईकी छोरी श्वेतालाई कु’टपिट गरियो, ड्र’ग्स दिइयो र किशो’रावस्थामा दु’र्व्यवहार गरियो। के तपाईं अझै यसो भन्नुहुने थियो; यदि अभिषेकले लगातार दु’र्व्यवहार र उ’त्पीडनको गु’नासो गर्यो र एकदिन आफूलाई झु’ण्ड्यायो? के प्र’तिक्रिया हुन्छ तपाइँको?? कहिलेकाहीँ हाम्रो लागिपनि द’या देखाउनुस्।
अभिषेक र श्वेता बलिउड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन र जया बच्चनका छोरा र छोरी हुन्। बलिउडकी कलाकार साथै स’माजवादी पा’र्टीकि सांसद जया बच्चनले राज्यसभामा ला’गुप’दार्थको नाम लिएर बलिउडलाई ब’दनाम गर्ने ष’डयन्त्र भइरहेको बताएकी थिइन्।
फिल्म उद्योगमा जसले अरुको सहयोगमा मात्र नाम कमाए आज उनीहरुनै ब’दनाममा लागि परेका छन् जयाले थपिन्। कंगनाले उनको यहि भनाइमा तुरुन्तै प्र’तिक्रिया देखाई हालिन्।’
Tagged कंगना रनावत
Previous Post: रियाका भाइ नै बने त’गारो, दिदीवि’रुद्ध दिए यस्तो बयान….
Next Post: बिदाइ कार्यक्रममा कुलमानले भावुक हुँदै यस्तो भने ……
कक्षा १२ को परीक्षाबारे आयो यस्तो खबर….. 6,298 views
सुशान्तको नो’टमा कृतिको नाम, के ले’खेका रहेछन्… 5,549 views
आन्तरिक उडान साेमबारदेखी खुल्ने, यस्ताे छ भाडादर… (तालिकासहित) 5,084 views